(60'x80')အကျယ်၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ အောင်ဇေယျလမ်းမပေါ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာအလွန်ကောင်း...
Ad Number S-9088474
(42'x60')အကျယ်၊ တောင်ဥက္ကလာ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမကျောကပ်၊ ကုန်းဘောင်(၁၄)လမ်း၊ လုံးချင်းအိမ် 1RC...
09-252588442 / 09-252588440 / 01-380461 / 01-386366
Ad Number S-9087258
Ad Number S-9085078
7,400 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9084312
ပေ၂၀ပေ၆၀ သိန်း၉၅၀ ညှိနိူင်း
Ad Number S-9084215
Ad Number S-9083860
#အမြန်ရောင်းမည်တ/ဥ ပေ၂၀ပေ၆၀ သိန်း၈၆၀အရှေ့လှည့် ၁၂ရပ်ကွက် လမ်းကျယ်လမ်းသွယ်...
Ad Number S-9083565
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ သံသုမာလမ္းေက်ာကပ္ လိုင္စင္ရံုးအနီး ေျမသီးသန္႔ေရာင္းမည္-09252627576
Ad Number S-9082743
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏၱာလမ္းအနီး RC-3ထပ္ အျမန္ေရာင္းမည္-09252627576
Ad Number S-9079622
Ad Number S-9079371